Trano, trano | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Trano, trano
"Fiarovana fiarovana"! Ny kôlibola: ny fitsipiky ny fepetra, ny fitsipika fampiharana, ary ny salan'isa
Ny fiandrasana ny andro mafana ho an'ny tompon'ny biby dia tsy mitondra fifaliana amin'ny fiaraha-misakafo ihany, fa koa ny olana amin'ny fleas, ticks. Ny parasita kely dia mampidi-doza ho an'ny fahasalamana sy ny fiainana ao an-tokantrano mahatsiravina, satria izy ireo no mitondra ny aretina vokatry ny areti-mifindra. Ny fitaovana tsara indrindra amin'ny mpandatsa-drà mampidi-doza dia fiompiana manokana.
Ahoana no iasany? Manidina avy amin'ny fleas ary manisy kalsa
Mandeha amin'ny fleas sy kofehy, miaraka amin'ny kofehy sy ny solitany - ny fomba malaza indrindra amin'ny ady atao amin'ny parasites amin'ny biby fiompy. Izy ireo dia manerantany, mora ampiasaina ary tsy lafo. Andao hiezaka hahatakatra azy ireo amin'ny antsipiriany bebe kokoa. Ahoana ny fomba fihetsika toy izany? Ny vinaingitra mavitrika dia mihaona ao amin'ny epidermis, balsama volo, ary matavy.
Alao ao an-tranonao izy ireo! Ahoana no hanaisorana ny pila ao amin'ny trano tsy miankina ary amin'ny fandraisana anjara amin'ny tolotra manokana
Tsy voatery ho isan'ny olo-tsotra sy mahasoa ny mponina ao an-trano! Manafika ny olona izy ireo, manaikitra ary miteraka fahasahiranana. Ny fahatarana amin'ny fandringanana azy dia tsy mendrika izany, satria mihabetsaka ny haavon-tsatroka mahavariana ireo parasy ireo. Ahoana ny hiady? Raha misy biby fiompy ao an-trano, ny zavatra voalohany tokony hatao dia ny famoahana ireo parasy avy amin'izy ireo.
Esory izy ireo! Bibilava mipoitra eo amin'ny loha: ahoana no fomba famonosana sy fepetra fisorohana
Hita fa ny biby dia tsy hita fotsiny amin'ny biby. Misy ny poti-olombelona. Tany aloha dia tsy niaina afa-tsy teo amin'ny kaontinanta Amerikana Tatsimo izy, ary ankehitriny dia miaina amin'ny toerana rehetra iainan'ny olombelona. Ny fangirifirian'ireny bibikely ireny dia mitondra olona maro be. Tsy miaina amin'ny vatan'olombelona mandrakariva izy ireo, satria raha oharina amin'ny vatana dia tsy misy zavamaniry manify.
Ny lozam-pifamoivoizana any an-dranomasina - "leopard" dia manidina amin'ny fleas sy tsiro, ary koa shampoos, sprays and collars
Ny namana tsara indrindra dia ny biby. Ny ankamaroan'ny fianakaviana dia manana biby be bibikely ao an-trano na trano - saka na alika. Fifaliana lehibe izany, nefa koa andraikitra iray, izay ahitana ny fikarakarana ny fahasalaman'ny biby fiompy. Matetika ny biby fiompy no tratran'ny tsy fahampian-tsakafo - fleas sy tsiro. Mila miatrika io olana io amin'ny fomba mahomby araka izay tratra ianao.
Ireo razambe dia hilaza aminay! Fanafody ho an'ny taolana: iankinan'ny aina, lavenona ary hafa
Ao anatin'ireo bibikely mipoaka mipoaka, izay afaka manimba ny fiainan'ny olona, ​​dia toerana iray manokana ny elatra. Voajanahary izy ireo, mitondra ny aretina mampidi-doza izy ireo, ary samy hafa amin'ny hoe sarotra ny manala azy ireo. Be ny fanaintainan'ny flea. Ny ady amin'ny parasites ao an-trano ao amin'ny trano fonenana sy ny toeram-ponenana dia vita amin'ny fomba samihafa.
Tsy misy afa-mamono ireo parasy! Fitaovam-pamokarana mahomby: shampoos, vakim-bolana, spray ary ny hafa
Raha hita amin'ny biby fiompy ny plastika, dia asaina misoroka avy hatrany ny fepetra, satria mety hisy vokany ratsy eo amin'ny biby ny bibikely. Tsy dia mampidi-doza loatra ny tikisotra, ka rehefa mandehandeha ny biby dia tokony hajanona ny fitandremana. Rehefa mifidy vokatra fanaraha-maso ny bibikely dia tokony hifantoka amin'ny fametrahana ny vokatra ianao, satria ny fisian'ny setroka be dia be dia mety hitera-pahavoazana na hoditra feno vatana.
Tsy misy olona azo antoka! Heloka olona: karazana sy fahasimbana
Ny fanatsoahan-kevitra fa miaina eo amin'ny olona iray dia manohitra foana. Tsy miaina amin'ny olombelona izy ireo, raha ny zava-misy, amin'ny saka, alika, biby hafa ary vorona. Mampiasa olona ho toy ny fitaterana izy ireo raha tsy mahita tampoka eo akaikin'ny zavatra mety tsara (alika, saka, rat, sns)
Avy amin'ny biby ho anao na biby fiompy iray amin'ny lehilahy! Ahoana no mampidi-doza ho an'ny olombelona ny pôlasy amin'ny saka?
Azonao atao vaksiny ny aretina rehetra. Ireo astronôma dia niaina nandritra ny taona maro tao amin'ny fiantsonana orbital. Ny zanak'olombelona dia tsy androany - ny ampitso dia hiatrika ny homamiadana sy ny SIDA. Ary matahotra ny fleoka isika! Ary tsy mahagaga izany. Niaina 55 tapitrisa taona lasa izay izy. Ny fahasamihafana voajanahary namono ny mammoths dia tsy nitondra ny voka-dratsin'ity parasy ity.
Famakafakana ny famokarana vokatra avy amin'ny flea: Advantix ho an'ny saka, Hartz, manipika Barrier sy vokatra hafa
Omaly ny sakaizanao dia feno fifaliana sy firavoravoana, saingy androany dia mitranga izany? Tampoka tampoka avy eo ilay sobika, mangalatra volon'ondry amin'ny fihetsika madinika? Indrisy fa, ireo vahiny tsy nampoizina - fleas - no tonga any amin'ny biby fiompinao. Hilaza ianao fa tsy mandao ny trano ny saka, ary mandeha amin'ny làlan-kiraro ny alika ary tsy mifanena amin'ny biby hafa ary tsy voan'ny aretina.
Arovy ny zanakao! Ny fleas dia manana hamsters hanapahana parasy
Maro amin'ny trano no manana hamsterina. Na dia madio aza izy, dia mety hanana pila ihany koa izy. Tsy izy ireo ihany no miaina, fa mifindra any amin'ny biby hafa miaina ao amin'io efitrano io koa. Ny fahatsapana fa misy parasy avy amin'ny zazalahy iray tsy dia manambady dia olana, satria madio foana izy. Na izany aza dia azo atao ny manamarika fa misy zavatra tsy mety noho ny fihenan-dratsy matetika sy ny ratra eo ambanin'ny akanjo.
Famerenana ny mahomby indrindra! Fanafody famonoana rano ao an-trano: raptor, raid, ary ny hafa
Bibidia an-trano - olana lehibe! Vetivety dia mihamahazo vetivety ireo bibikely manelingelina. Saingy tokony hiasa mafy ireo "mpifanolo-bodirindrina" ireo. Tsy ny fanafody famonoana bibilava rehetra no manimba ny rà. Ireo karazam-pihetseham-panoherana maneran-tany no manapotika ny rà, ka tsy misy antony tokony hampiasana azy.
Volamena fotsiny, fa famonjena! Tondraka avy amin'ny fleas Advantage ho an'ny saka, torolalana ho an'ny zava-mahadomelina
Advantage (Advantage) - fitaovana hiadiana amin'ny biby fiompy, navoakan'ny alika Bayer HealthCare AG. Nandritra ny fisiany, dia novalian'ireo mpitsabo maro sy mpitrandraka saka maro ny zava-mahadomelina. Ny fitaovam-piadiana mahery vaika dia miaro ny biby an-trano amin'ny alàlan'ny parasy, izay miteraka ra, izay, indraindray, dia mitondra ny aretina amin'ny aretina.
Momba ny fiarovana ny saka anao! Mpisolovava: sambokely kisoa ary miala sasatra
Manondraka ny fako amorom-paty novokarin'ny biraon'ny Bayer Animal Health izay miompana amin'ny famokarana vahaolana amin'ny bibikely. Mahomby izy ireo amin'ny ady atao amin'ny parasites (karazana mitefika, paompy) ary interne (helminths). Ary dia hamakafaka amin'ny antsipirihany kokoa ny fomba ampiasan'ny mpisolovava.
Arovy ny lambanao! Mamolavola leoparda ho an'ny saka sy fitaovana hafa amin'ny mpitondra iray avy amin'ny fleas sy kofehy
Bibilava sy fleoka dia mampidi-doza amin'ny aretina izay afaka miteraka voka-dratsy amin'ny vatan'olombelona. Tsy manimba ny fiainan'ny biby fiompy izy ireo. Mba hiarovana ny saka amin'ny tsikitsiky mety sy tsindrona amin'ny aretina, afaka mampiasa fanafody azo antoka ianao. Ny Leopard dia hiaro ny biby ary hamela ny olona tsy hatahotra hampiditra bibikely mampidi-doza ao an-trano.
Ho velom-pankasitrahana anao ry zareo! Ahoana ny ao an-tokantrano hitondra sombin-kanina
Sarotra angamba izao ny mitady fianakaviana tsy misy saka, satria tsy misy zaza kamboty akory! Manome antsika fahasahiranana maro izy ireo, handrava ny tapakila, mifoha amin'ny alina izy ireo, mangalatra karazana sokatra eny ambony latabatra, nefa mbola tiantsika izy ireo ary tsy afaka maka sary an-tsaina ny fiainantsika raha tsy ankafizintsika. Mena sy fotsy, fotsy sy fotsy, marevaka sy malefaka ary kesika misy kesika sy saka izay mandeha amin'ny tenany - izy ireo dia tiantsika indrindra!
Tsy lafo sy tena mahomby! Manidina ny saka amin'ny saka: fitsipiky ny fampiasana, ary koa ny fijerena fohy momba ny tsara indrindra
Rehefa manaiky biby fiompy iray eo amin'ny fiainanao ianao, dia tokony ho takanao fa ny andraikitry ny tompony dia tsy mameno ny vilia miaraka amin'ny sakafo fotsiny ary manala ny zezika ara-potoana. Indraindray ny biby dia afaka mahazo saka "saka" sasantsasany izay mahafoy ny hoditry ny namany vaovao sy ny trano manontolo.
Tsy manan-tsahala ny biby fiompinao, fa ny tsy fahamendrehan'ny parasites! Taratasy ho an'ny saka: vidiny sy torolàlana ampiasaina
Amin'ny fampiasana parazita saro-tahotra ho an'ny saka, dia mahomby ny fiarovana sy ny fiarovana. Ny fampiofanana toy izany dia mora ampiasaina, ampiharina eo amin'ny sehatry ny fahasimban'ny biby izy ireny ary misy bibikely mpamono bibikely izay manafoana ny tsy fitoviana mifandraika amin'ny fisehoan'ny vovobonan'ny ra. Ny dity maoderina dia tsy mampidi-doza ny fahasalaman'ny saka kely.
Tady mahavariana ary miaro! Hazo vongana ho an'ny saka
Ny kofehy avy amin'ny fleas sy ny mofomamy ho an'ny saka dia tsotra sy azo antoka. Ampy ny mametraka saka ary azonao adino ny parasy. Na dia tsy tanteraka tanteraka aza. Aoka ho azontsika tsara io fanontaniana io. Ny fomba fiasany Ny plastika dia plastika plastika misy tadiny 30 ka hatramin'ny 40 santimetatra lava, voasariky ny fanafody antiparasitika.
Tsotra sy mahomby! Kelyina misy elatra sy kofehy ho an'ny saka
Ny Celandine na ny ahi-maitso, araka izay nantsoin'ny olona azy, dia manana toetra mahasoa maro. Betsaka ny fanafody efa voaomana amin'ny fototra, anisan'izany ny fanomanana antiparasitika ho an'ny biby. Midika hoe "Celandine" avy amin'ny fleas sy tsimoka ho an'ny saka ny fanafody veterinera. "Celandine" - tsipika mahazatra Fanomanana izay ahitana ny alkaloid celandine - zava-mahadomelina mahomby izay tokony ampiasaina amim-pitandremana, ary manaraka tsara ny torolàlana.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Trano, trano